12 UJobe waphendula wathi: 2 “Ngempela nina madoda yinina abantu,Futhi ukuhlakanipha kuyofa nani!+ 3 Nami nginenhliziyo+ njengani.Angingaphansi kwenu,+Futhi ubani ezingekho kuye izinto ezinjengalezi? 4 Ngiba umuntu oyinhlekisa kumuntu wakubo,+Obiza uNkulunkulu ukuba amphendule.+Olungile, ongenakusoleka uyinhlekisa. 5 Ngokucabanga, ongenazinkathazo wedelela ukushabalala uqobo;+Kulungiselwe labo abanezinyawo ezixegezelayo.+ 6 Amatende abaphangi awakhathazekile,+Futhi labo abenza uNkulunkulu afutheke banokuphephaKwalowo oza ephethe unkulunkulu ngesandla sakhe.+ 7 Nokho, ngiyacela, buza izilwane ezifuywayo, zizokufundisa;+Nezidalwa ezinamaphiko zamazulu, zizokutshela.+ 8 Noma ukhathalele umhlaba, uzokufundisa;+Nezinhlanzi zolwandle+ zizokumemezela kuwe. 9 Yikuphi phakathi kwakho konke lokhu okungazi kahleUkuthi isandla sikaJehova uqobo sikwenzile lokhu,+ 10 Osesandleni sakhe umphefumulo+ wakho konke okuphilayoNomoya wayo yonke inyama yomuntu?+ 11 Indlebe ayiwavivinyi yini amazwi+Njengoba ulwanga+ lunambitha ukudla? 12 Akukho yini ukuhlakanipha kulabo asebebadala+Nokuqonda ebudeni bezinsuku? 13 Kuye, kukhona ukuhlakanipha namandla;+Uneseluleko nokuqonda.+ 14 Bheka! Uyadiliza, kungabe kusakhiwa;+Ukuvalela umuntu, kungabe kusavulwa.+ 15 Bheka! Uyawavimbela amanzi futhi ayoma;+Uyawathumela, futhi ashintsha umhlaba.+ 16 Kuye kunamandla nokuhlakanipha okusebenzayo;+Owenza iphutha nodukisayo bangabakhe;+ 17 Wenza abeluleki bahambe bengafake zicathulo,+Futhi wenza abahluleli imbala basangane. 18 Empeleni uthukulula izibopho zamakhosi,+Abophe ibhande ezinqulwini zawo. 19 Wenza abapristi bahambe bengafaké zicathulo,+Nabahlezi phakade uyabaketula;+ 20 Ususa inkulumo kwabathembekileyo,Nokuba nengqondo kwamaxhegu uyakususa; 21 Uthulula ukwedelela phezu kwezicukuthwane,+Futhi ibhande labanamandla empeleni ulenza libe buthaka; 22 Wembula izinto ezijulile ebumnyameni,+Futhi uletha ekukhanyeni ithunzi elimnyama; 23 Enze izizwe zikhule zibe zinkulu, ukuze azibhubhise;+Asakaze izizwe, ukuze azihole azimukise; 24 Asuse inhliziyo yabayizinhloko zabantu bezwe,Ukuze abenze bazulazule endaweni engenalutho,+ lapho kungenandlela khona. 25 Baphumputha ebumnyameni,+ lapho kungenakukhanya khona,Abenze bazulazule njengomuntu odakiwe.+